Awulunganga, Nazi izizathu ezi-4 zokuba kutheni iMithombo yeendaba yeNtlalontle ichaphazela i-SEO | Martech Zone
Ngaba singacela ukubeka le ngxoxo ekuphumleni? Kubonakala kum ukuba kukho iingcali ezithile phaya ezinyelisa imithombo yeendaba zentlalo ngaphandle kokuqonda ngokupheleleyo ifuthe layo. Intlalontle yindlela yokukhuthaza eyakha ubumbano lwentengiso kunye nokubonelela ngabaphulaphuli ababanzi. Andifuni ukuwafaka onke, kodwa kubonakala ngathi uninzi lwengxolo luza kubaqeqeshi be-SEO-abangathandi ukwabelana ngebhajethi kumajelo asekuhlaleni. Ngelishwa, bazenzela into enkulu.
Ngapha koko, esi sithuba ngumzekelo ogqibeleleyo. Ndinezilumkiso zentlalo ukuseta kuyo yonke iwebhu ukusithumela nge-imeyile xa kukho abakhankanyi abathile, imigaqo kunye neetekhnoloji ukuze sibhale ngazo. Ndiziphonononga ezo ndawo kwaye zihlala ndigcina umxholo kubalandeli bethu. Kule meko, i-infographic engezantsi ayifumanekanga kolunye lwezilumkiso. Kodwa xa bendifunda elinye inqaku kwindawo, ukubonwa kwangaphambili kwe-infographic engezantsi kubonisiwe kwicandelo lezithuba ezihambelanayo. Ndaye ke ndafunda i-infographic kwaye ndacinga ukuba intle. Ndaye ke ndabuya ndaya kuGoogle ndiyokuphanda ngomthombo we-infographic Ukungeniswa kweSMO, kwaye wafumana infographic, I-SEO kunye neMithombo yeendaba yeNtlalontle ichaphazela njani ukuBekwa kweWebhusayithi yakho?.
Ke, iinzame zentlalontle ye-Submitedge ye-SMO yokwazisa nge-infographic ngokungangqalanga ikhokelele kum ekubakhuthazeni nasekuboneleleni nge-backlink kwiphepha labo ngesihloko esithile kwi-bailiwick yabo. Boom! Ukuba bebengabelani ngeenzame zabo kwimidiya yoluntu, ngendingazange ndibabone! Ungayichazanga eyokuba xa bengakhange babekwe nakweliphi na ixesha elinxulunyaniswa nale infographic, ayikho enye indlela ebendinokubafumana ngayo.
Indawo yakho kwiwebhusayithi ixhomekeke ngokupheleleyo kwi-SEO nakwiMidiya yoLuntu. Zombini ezi zinto zinje ngeenyawo ezimbini ezinceda iwebhusayithi ukuba ihambe inyathelo ngenyathelo. Nangona kunjalo, izikhombisi ezichazwe apha ngezantsi ziya kukwazisa ngezibonelelo zeMithombo yeendaba kunye ne-SEO kwizinga lakho.
I-SEO kunye neMithombo yeendaba yeNtlalontle ichaphazela njani ukuBekwa kweWebhusayithi yakho?
Ikhonkco elinokubakho -Umzekelo ongentla bubungqina obugqibeleleyo bokuba iyasebenza. Ukusasaza umhlaba ngokwasentlalweni kukhuthaza umxholo wakho kubaphulaphuli ababanzi, ukwandisa amathuba okuba kwabelwane ngawo nabanye. Kwaye ukuba yi-infographic, sele uwanyusile amathuba akho!
zobuqu -Andizange ndicinge ngale nto kodwa kuba iziphumo zophendlo zenzelwe umntu ongene kuGoogle, kwaye yenzelwe umntu wonke ongekhoyo, oku kwahluka kwezona ziphumo zinikwa umphandi ngamnye. Abasebenzisi ababandakanyekayo ekuhlaleni bakha iprofayili ebhalwe igama lakho kwaye ezo ziphumo zinokutshatisa iinzame zakho-ukubonelela ngokwanda, ngokuthe ngqo, ngokubonakala.
Umbuzo woKhangelo lweVolumu -Kwakhona, ukuphuma phaya kwilizwe lentlalontle kwakha ukuthembeka kwakho, igunya kunye nobudlelwane. Qalisa ukufumana ilogo yakho okanye ujonge kubaphulaphuli ngokubanzi kwaye ukwamkelwa kuya kuqhuba abathengi kuwe. Le bhlog kunye imagi yam embi ngumzekelo ogqibeleleyo! Kungenxa yoko ubuso bam busendaweni yonke-nokuba uyathanda okanye awuthandi;).
Iimpawu zohlobo -Ngotshintsho lwe-algorithm yakutshanje kunye nenkqubela phambili kwi-Google's algorithm, ndiyakholelwa ukuba uninzi lwezinto ezindala ze-SEO zesikolo zijongele phantsi ifuthe lokucaphula ekuqinisekiseni ukubaluleka konxibelelwano kunye; ekugqibeleni, simo. Igama lakho lophawu, igama lemveliso, amagama omqeshwa, iidilesi kunye neenombolo zefowuni zizinto zonke zedatha eyahlukileyo. Ukuzifumana phaya kuzo zonke iisayithi zentlalo kuqinisekisa ubukho bakho kunye negunya.
Kunika umdla kum ukuba iingcali zophando zangoku zisebenzisa umxholo kwaye zisebenzela ukufumana loo mxholo uboniswe kwiziza zemithombo yeendaba ezifumanekileyo nezingabanini bazo. Bayenza njani loo nto? Rhoqo ngeendlela zokunxibelelana noluntu. Cinga malunga nale nto… basebenzisa iinzame zentlalo ukonyusa amathuba okuba amakhonkco aveliswe kumxholo obhalwe ngokuthe ngqo okanye kwabelwana ngawo ziisayithi ezinempembelelo. Hmmm… ayinakwenzeka loo nto kwimidiya yoluntu? Ewe kunjalo.
tags: ifuthe kwezentlaloenjini yokukhangela nounkhangela izicwangciso zokuthengisaindawo yokukhangelakhangela vs kwezentlaloSEOseo kunye noluntuamacebo seoseo vs kwezentlaloyentlalo kunye nokukhangelakwezentlalo kunye seoiimpembelelo zentlaloamaqhinga eendaba ezentlaloizicwangciso zentlalointlalontle xa kuthelekiswa seoezentlalo vs seoukuhanjiswa kweSmo
Intle enye uDoug. Oko kwathethi, ndicinga ukuba uphikisana nembono ezimbini ezahlukeneyo kwi-SEO yoluntu (kwaye ndiyazi ukuba awunguye kodwa yibhlog ngoko masibe nengxoxo. Zeziphi ezinye ezenzelwe zona?):
1. Umsebenzi wentlalontle unokukhokelela kwizinto ezisemgangathweni
2. Umsebenzi wentlalontle "yinto esezingeni"
Ndiyavumelana # 1. Andivumelani ne- # 2 ngaphandle kwemeko ye-Google +.
Ngokuqinisekileyo uyavuma uAndrew! Ndifanele ndikwenze kwacaca oku kwisithuba sam. I-IMO, ukuba awusebenzi kwimizamo yakho yentlalo, yenza ukuba kubenzima kakhulu ukubekwa kwinqanaba. IMO kufuneka ube nobuchule kuzo zombini.
Ewe uyinkosi yeqhosha 🙂
Ukunyaniseka yayingeyonjongo yam, kodwa ndiza kuyithatha!